Abaal iyo Agoon - NETBEINS
:Abaal iyo Agoon
Abaal iyo Agoon
Iyadoo 14 jir ah ayaa lagu daray nin waxbadan ka weyn da’ahaan, oo xooga ladnaa dhaqaale ahaan. 7 sano oo ay is qabeen kadib, ayuu ninkeedii geeriyooday, wuxuuna uga tagay 3 carruur ah iyo hantidiisii. Xaas kale iyo ilmo kale kama tagin, sidaas darteed iyada iyo ilmaheedii ayaa loo dhaxlay wixii uu ka tagay ee […]
By admin April 23, 2019, 10:53 PM
Iyadoo 14 jir ah ayaa lagu daray nin waxbadan ka weyn da’ahaan, oo xooga ladnaa dhaqaale ahaan. 7 sano oo ay is qabeen kadib, ayuu ninkeedii geeriyooday, wuxuuna uga tagay 3 carruur ah iyo hantidiisii. Xaas kale iyo ilmo kale kama tagin, sidaas darteed iyada iyo ilmaheedii ayaa loo dhaxlay wixii uu ka tagay ee maal ahaa. Sifiican ayey xil isaga saartay korriimada iyo waxbarashada carruurta, iyaduuna Jaamacad ku taalla Xamar oo ay dhiganeysay markii ninkeedu dhintay ayey dhammeysay, isla markaasna waxey shaqo ka heshay mid ka mida hay’adaha Xalane ka hawl-gala. Maandaaba iyadoo yar guurkeedu dhacay, waxaa isku soo aaday iyadoo weli aad u da’yar iyo geeridii ninkeeda, oo markaan 21 jir ayey ahayd, sidaas darteed inkastoo carruur yaryar misana agoon ihi u joogtay, haddana waxey isku dayeysaa iney la haa sowdo wiilasha soo damaaciya, laakin aan xaqiiqadeeda ka warhayn. Muddo sanad ah kadib geeridii ninkeeda, ayey is baranayaan wiil ardey ka ah Jaamacadda SIMAD. Xiriir muddo 8 bilood ah qaatay kadib, waa ay is guursadeen.
Dhammaan qarashka ku baxaya guurkooda, iyadaa ayaa bixineysa, sidoo kale biilka reerka iyadaa bixineysaa. Wiilkii ay is qabeen waxaa ku adkaaneysa inuu magaalada shaqo ka helo, wuxuu usoo jeedinaya haddii uu Master soo diyaariyo, inuu heli lahaa shaqo fiican. Waxey u ballan qaadeysa in ay Master u direyso, weliba jaamacadda uu rabo iyo dalka uu rabo si kasta oo dalkaas iyo jaamacaddaas qiimaheedu u sarreeyo. Sidii ay ka ballan qaadday ayey sameyneysaa. Sanad iyo bar kadib oo ay is qabeen dibadda ayey waxbarasho ugu direysaa, waxeyna ku qarash gareyneysaa noloshiisa iyo jaamacaddiisa lacag 30,000$ kun ah. 3 sano kadib ayuu kusoo noqonayaa magaalada Muqdisho. Horay waxba iskuguma dhalin laakiin soo noqod kiisaan dambe ayey uur qaadeysaa gabadhii wiil ayeyna u dhaleysaa, laakiin marka ay cunuga dhasho ayey maqleysaa in ninkeedii islaan kale guursaday. Keliya islaan kale ma guursan, ee wuxuu usoo diray warqad furriin ah, islaanta uu guursaday waa islaan labadoodaba ka weyn.
Gabadhii waxey gashay xaalad wareer iyo walbahaar leh, waxey ku siganeysaa iney isla hadasho. Waxaa u qaadan waa ku noqonayaa ninkii ay isla dhiseen jacaylkaan xuduudda lahayn, ninkii ay iyaduu ka buuxiisay doorkiisii arooska iyo guurka ninkii aysan marna weydiin shillin lacaga iyo masuuliyad in ay iyadu kabto ma ahan, ninkii ay ka bixisay lacagtii labadiisa shahaado, ha ugu darnaate ninkii ay 30,000$ ku qarash gareysay, oo ah lacagtii ilmaheeda agoonta ah, oo ay islaheed wuxuu noqon doona aabaheed oo kale, oo isaga gudi doona markuu yimaada, waxaase dhacay intaas oo dhan kasoo horjeedkeeda.
Si dabiiciya meel ay salka ku hayso cidi ma taqaan, laakiin dumarku dhammaantood iney neceb yihiin in lala guursado, waxey ka neceb yihiin in lala guursado islaan ka weyn, oo mushkilo badan kuma qabaan haddii gabar ka yar ninku la guursado, sidaas darteed gabadhaan arrimaha u qaadawaaga ku noqday ayey tani ka mid ahayd, marka abaal dhaca iyo furriinka aysan muteysan laga reebo.
Arrintii heer waxey gaartay ugu dambeyn ay reerkiisa u dacwooto, iyadoo ku dacwooneysa in ay kasiiyaan lacagtii agoonta, intii kale ay iyadu lahayd waa ay ka samri kartaaye. Duruuf nololeed iyo xaalad caafimaad oo adag ayaa gabadhii soo wajahday, oo kallifeysa iney muuqaalkeedu is badalo, bulshada ay ka dhexbaxdo, shaqadii ka tagto ugu dambeyna ay sigato iney balwad barato, waxaase u gargaaraya oo hiil talo iyo niyad ugu dedaalaya saaxibtey oo jidka Makka Almukarama ku leh Salon meesha dumarka lagu qurxiyo, taas oo ay u iman jirtay markasta si ay ugu calaacasho iyadoo ku dareemi jirtay nafis. Saaxibteed ayaa ku dedaaleysa in aan iyada ma ahane, qofkale u sheekeyn, ugu dambeyna ay is arkayaan gabdho iyo wiilal ay isla shaqeyn jireen, oo ay la wadaageysaa xaaladda ku dhacday gabadha. Kadibna hay’adda ayaa fasax iyo caafimad isugu dareysa oo dalka dibaddiisa u qaadeysa muddo kadibna waxey kusoo noqotay dalka, inkastoo firfircoonidii iyo qofnimadeedii dhaawacu weli ka muuqdo.